၂၀၁၈-၁၉ ရာသီ ပရီးမီးယားလိဂ်အဖွင့်ကို မန်ယူ နိုင်ပွဲနဲ့ စတင်နိုင်မလား
10 Aug 2018 . 5:00 PM
၂၀၁၈-၁၉ ရာသီ ပရီးမီးယားလိဂ်ပြိုင်ပွဲကြီးကတော့ ဒီနေ့(သောကြာ)မှာ စတင်ပါပြီ။ အဖွင့်ပွဲမှာ နာမည်ကြီး မန်ယူနဲ့ လက်စတာအသင်းတို့ ယှဉ်ပြိုင်ကစားကြမှာဖြစ်တာကြောင့် ဘယ်သူ တာထွက်လှမလဲဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ။ မန်ယူအသင်းဟာ ဒီနွေရာသီအပြောင်းအရွှေ့မှာ ဖရက်ဒ် Fred ၊ ဒါလော့တ် Dalot ၊ လီဂရန့် Lee Grant တို့ကိုသာ ခေါ်ယူခဲ့ပြီး လက်စတာအသင်းကတော့ ကစားသမားသစ်(၇)ဦးအထိ အားဖြည့်ခဲ့တယ်။ မန်ယူအသင်းရဲ့ ရာသီကြိုခြေစမ်းပွဲ ရလဒ်တွေနဲ့ ခြေစွမ်းက သိပ်အားရစရာ မကောင်းတာကြောင့် မန်ယူပရိသတ်တွေလည်း ကိုယ့်အသင်းအနေအထားကို သိပ်ပြီးအားရကျေနပ်မှု မရှိကြဘူး။ လက်စတာအသင်းကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတုန်းက အဆင့်(၉)နေရာရရှိခဲ့တာထက် ရာသီသစ်မှာ အောင်မြင်မှု ပိုမိုရရှိဖို့ ပြင်ဆင်နေတာကြောင့် မန်ယူအသင်းအနေနဲ့ လက်စတာကို ခက်ခက်ခဲခဲ ရင်ဆိုင်ရဖို့ရှိနေတယ် . . .
မန်ယူအသင်းမှာ ဒဏ်ရာပြဿနာတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရပြီး ရိုမဲရိုး Romero ၊ ဗလင်စီယာ Valencia ၊ ရိုဟို Rojo ၊ ဒါလော့တ် Dalot တို့ ဒဏ်ရာကြောင့် အခုပွဲကို လွဲချော်မှာဖြစ်သလို ကွင်းလယ်လူတွေဖြစ်တဲ့ ဟာရဲရား Herrera ၊ မာတစ် Matic တို့လည်း မသေချာဘူး။ မန်ယူလိုပဲ လက်စတာအသင်းမှာလည်း ဒဏ်ရာရ ကစားသမား များနေပြီး (၆)ဦးအထိ လွဲချော်ဖို့ရှိနေတယ်။ ကစားသမားသစ်တွေဖြစ်တဲ့ ဘန်ကိုဗစ် Benkovic ၊ ရီကာဒိုပါရဲရား Ricardo Pereira ၊ ဂီဇယ်လ် Ghezzal တို့တော့ လက်စတာအသင်းအတွက် ပွဲထွက်ကစားဖို့ များတယ်။
ပရီးမီးယားလိဂ် ရာသီ အဖွင့်ပွဲဖြစ်တာကြောင့် အကြိတ်အနယ်ရှိမှာ အသေအချာပဲ။ တကယ်လို့ မန်ယူသာ ဂိုးရချင်ဇောနဲ့ တိုက်စစ်ဖွင့်ရင် လက်စတာရဲ့ Counter Attack Play တွေက ဒုက္ခပေးလိမ့်မယ်။ မာရက်ဇ် Mahrez ကို လက်လွှတ်ခဲ့တာက လက်စတာအတွက် ထိုးနှက်ချက်ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ သူသာ ရှိနေရင် လက်စတာရဲ့ Counter တွေက ပိုကောင်းလာမှာ။ လက်စတာဟာ မန်ယူနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် နောက်ဆုံး(၇)ပွဲမှာ တစ်ပွဲမှ မနိုင်ခဲ့သလို နောက်ဆုံး(၁၈)ပွဲမှာလည်း (၁)ပွဲပဲ နိုင်ခဲ့တယ်။ အဆိုးဆုံးကတော့ အိုးလ်ထရက်ဖို့ဒ် မှတ်တမ်းပါပဲ။ အိုးလ်ထရက်ဖို့ဒ်မှာ (၈)ပွဲကစားခဲ့ပြီး (၁)ပွဲသာ နိုင်ခဲ့တယ်။ မန်ယူအသင်းအနေနဲ့လည်း ရာသီသစ်ကို အိမ်ကွင်းနိုင်ပွဲနဲ့ စတင်ချင်နေမှာ အမှန်ပဲ။ မန်ယူ (၃)မှတ်ရဖို့ရှိပေမယ့် ဂိုးပြတ်ဖို့တော့ မလွယ်ဘူးလို့ထင်တယ်။
ဖြစ်နိုင်ဖွယ် ရလဒ် – မန်ယူ ၂-၀ လက်စတာ
-မန်ယူအသင်းဟာ လက်စတာနဲ့ ဆုံတွေ့ခဲ့တဲ့ နောက်ဆုံး ပရီးမီးယားလိဂ်(၇)ပွဲမှာ (၄)ပွဲနိုင်၊ (၃)ပွဲသရေကျခဲ့ပြီး ရှုံးပွဲမရှိခဲ့ဘူး။
– ပရီးမီးယားလိဂ်သမိုင်းတစ်လျှောက် ရာသီအဖွင့်ပွဲမှာ မန်ယူအသင်း အနိုင်ရခဲ့တာက (၁၇)ပွဲရှိခဲ့ပြီး နိုင်ပွဲရရှိမှု အများဆုံးအသင်းအဖြစ် ရပ်တည်နေတယ်။
– မန်ယူနဲ့ လက်စတာအသင်းတို့ ပရီးမီးယားလိဂ်ရာသီအဖွင့်မှာ ဆုံတွေ့ခဲ့ဖူးတာက ၁၉၉၈-၉၉ ရာသီမှာဖြစ်ပြီး (၂)ဂိုးစီ သရေကျခဲ့တယ်။
– အင်္ဂလန်ဘောလုံးသမိုင်းတစ်လျှောက် ပရီးမီးယားလိဂ်ရာသီအဖွင့်ပွဲကို သောကြာနေ့ကစားတာက ဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီက အာဆင်နယ်-လက်စတာပွဲကို သောကြာနေ့ကစားခဲ့ပြီး လက်စတာက (၃-၄)ဂိုးနဲ့ ရှုံးနိမ့်ခဲ့တယ်။
– မန်ယူအသင်း ကွင်းလယ်ကစားသမား မာတာ Mata ဟာ လက်စတာအသင်းနဲ့ ဆုံတွေ့ခဲ့တဲ့ နောက်ဆုံး ပရီးမီးယားလိဂ်(၄)ပွဲမှာ (၄)ဂိုးသွင်းခဲ့ပြီး လက်စတာပြီးရင် သူ ဂိုးအများဆုံးသွင်းခဲ့တာက နောဝစ်ခ်ျ(၅ဂိုး)ဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၁၈-၁၉ ရာသီ ပရီးမီးယားလိဂျအဖှငျ့ကို မနျယူ နိုငျပှဲနဲ့ စတငျနိုငျမလား
၂၀၁၈-၁၉ ရာသီ ပရီးမီးယားလိဂျပွိုငျပှဲကွီးကတော့ ဒီနေ့(သောကွာ)မှာ စတငျပါပွီ။ အဖှငျ့ပှဲမှာ နာမညျကွီး မနျယူနဲ့ လကျစတာအသငျးတို့ ယှဉျပွိုငျကစားကွမှာဖွဈတာကွောငျ့ ဘယျသူ တာထှကျလှမလဲဆိုတာ စိတျဝငျစားစရာပါပဲ။ မနျယူအသငျးဟာ ဒီနှရောသီအပွောငျးအရှမှေ့ာ ဖရကျဒျ Fred ၊ ဒါလော့တျ Dalot ၊ လီဂရနျ့ Lee Grant တို့ကိုသာ ချေါယူခဲ့ပွီး လကျစတာအသငျးကတော့ ကစားသမားသဈ(၇)ဦးအထိ အားဖွညျ့ခဲ့တယျ။ မနျယူအသငျးရဲ့ ရာသီကွိုခွစေမျးပှဲ ရလဒျတှနေဲ့ ခွစှေမျးက သိပျအားရစရာ မကောငျးတာကွောငျ့ မနျယူပရိသတျတှလေညျး ကိုယျ့အသငျးအနအေထားကို သိပျပွီးအားရကနြေပျမှု မရှိကွဘူး။ လကျစတာအသငျးကတော့ ပွီးခဲ့တဲ့ရာသီတုနျးက အဆငျ့(၉)နရောရရှိခဲ့တာထကျ ရာသီသဈမှာ အောငျမွငျမှု ပိုမိုရရှိဖို့ ပွငျဆငျနတောကွောငျ့ မနျယူအသငျးအနနေဲ့ လကျစတာကို ခကျခကျခဲခဲ ရငျဆိုငျရဖို့ရှိနတေယျ . . .
မနျယူအသငျးမှာ ဒဏျရာပွဿနာတှနေဲ့ ရငျဆိုငျနရေပွီး ရိုမဲရိုး Romero ၊ ဗလငျစီယာ Valencia ၊ ရိုဟို Rojo ၊ ဒါလော့တျ Dalot တို့ ဒဏျရာကွောငျ့ အခုပှဲကို လှဲခြျောမှာဖွဈသလို ကှငျးလယျလူတှဖွေဈတဲ့ ဟာရဲရား Herrera ၊ မာတဈ Matic တို့လညျး မသခြောဘူး။ မနျယူလိုပဲ လကျစတာအသငျးမှာလညျး ဒဏျရာရ ကစားသမား မြားနပွေီး (၆)ဦးအထိ လှဲခြျောဖို့ရှိနတေယျ။ ကစားသမားသဈတှဖွေဈတဲ့ ဘနျကိုဗဈ Benkovic ၊ ရီကာဒိုပါရဲရား Ricardo Pereira ၊ ဂီဇယျလျ Ghezzal တို့တော့ လကျစတာအသငျးအတှကျ ပှဲထှကျကစားဖို့ မြားတယျ။
ပရီးမီးယားလိဂျ ရာသီ အဖှငျ့ပှဲဖွဈတာကွောငျ့ အကွိတျအနယျရှိမှာ အသအေခြာပဲ။ တကယျလို့ မနျယူသာ ဂိုးရခငျြဇောနဲ့ တိုကျစဈဖှငျ့ရငျ လကျစတာရဲ့ Counter Attack Play တှကေ ဒုက်ခပေးလိမျ့မယျ။ မာရကျဇျ Mahrez ကို လကျလှတျခဲ့တာက လကျစတာအတှကျ ထိုးနှကျခကျြဖွဈလာနိုငျတယျ။ သူသာ ရှိနရေငျ လကျစတာရဲ့ Counter တှကေ ပိုကောငျးလာမှာ။ လကျစတာဟာ မနျယူနဲ့ တှဆေုံ့ခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂျ နောကျဆုံး(၇)ပှဲမှာ တဈပှဲမှ မနိုငျခဲ့သလို နောကျဆုံး(၁၈)ပှဲမှာလညျး (၁)ပှဲပဲ နိုငျခဲ့တယျ။ အဆိုးဆုံးကတော့ အိုးလျထရကျဖို့ဒျ မှတျတမျးပါပဲ။ အိုးလျထရကျဖို့ဒျမှာ (၈)ပှဲကစားခဲ့ပွီး (၁)ပှဲသာ နိုငျခဲ့တယျ။ မနျယူအသငျးအနနေဲ့လညျး ရာသီသဈကို အိမျကှငျးနိုငျပှဲနဲ့ စတငျခငျြနမှော အမှနျပဲ။ မနျယူ (၃)မှတျရဖို့ရှိပမေယျ့ ဂိုးပွတျဖို့တော့ မလှယျဘူးလို့ထငျတယျ။
ဖွဈနိုငျဖှယျ ရလဒျ – မနျယူ ၂-၀ လကျစတာ
-မနျယူအသငျးဟာ လကျစတာနဲ့ ဆုံတှခေဲ့တဲ့ နောကျဆုံး ပရီးမီးယားလိဂျ(၇)ပှဲမှာ (၄)ပှဲနိုငျ၊ (၃)ပှဲသရကေခြဲ့ပွီး ရှုံးပှဲမရှိခဲ့ဘူး။
– ပရီးမီးယားလိဂျသမိုငျးတဈလြှောကျ ရာသီအဖှငျ့ပှဲမှာ မနျယူအသငျး အနိုငျရခဲ့တာက (၁၇)ပှဲရှိခဲ့ပွီး နိုငျပှဲရရှိမှု အမြားဆုံးအသငျးအဖွဈ ရပျတညျနတေယျ။
– မနျယူနဲ့ လကျစတာအသငျးတို့ ပရီးမီးယားလိဂျရာသီအဖှငျ့မှာ ဆုံတှခေဲ့ဖူးတာက ၁၉၉၈-၉၉ ရာသီမှာဖွဈပွီး (၂)ဂိုးစီ သရကေခြဲ့တယျ။
– အင်ျဂလနျဘောလုံးသမိုငျးတဈလြှောကျ ပရီးမီးယားလိဂျရာသီအဖှငျ့ပှဲကို သောကွာနကေ့စားတာက ဒုတိယအကွိမျဖွဈပါတယျ။ ပွီးခဲ့တဲ့ရာသီက အာဆငျနယျ-လကျစတာပှဲကို သောကွာနကေ့စားခဲ့ပွီး လကျစတာက (၃-၄)ဂိုးနဲ့ ရှုံးနိမျ့ခဲ့တယျ။
– မနျယူအသငျး ကှငျးလယျကစားသမား မာတာ Mata ဟာ လကျစတာအသငျးနဲ့ ဆုံတှခေဲ့တဲ့ နောကျဆုံး ပရီးမီးယားလိဂျ(၄)ပှဲမှာ (၄)ဂိုးသှငျးခဲ့ပွီး လကျစတာပွီးရငျ သူ ဂိုးအမြားဆုံးသှငျးခဲ့တာက နောဝဈချြ(၅ဂိုး)ဖွဈပါတယျ။